तिथि मेरो पत्रु »7कुरूप गल्तीबाट महिला त्यो खण्डहर एक वैवाहिक कुनै पनि संभावना बनाउन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 04 2020 |2मिनेट पढ्न
कुनै एक सिद्ध छ. वास्तवमा, डेटिंग सबैलाई थिए भने एकदम धेरै रूपमा रमाइलो हुन छैन. तथापि, त्यहाँ डेटिङ अनुभव बिगार्न सक्छ कि तरिकाहरू छन्. तल सुझाव डेटिङ गर्दा महिला के हुँदैन भनेर कुरूप गल्ती हो.
अति उपलब्ध हुँदा
सम्पर्क भन्दा सुरुवात र तत्काल उसलाई कुनै पनि पत्राचार सुनिरहेका भन्न कि तपाईं पनि उपलब्ध छन् सबै संकेत हो. मानिसहरू अरूले चाहन्थे छन् जो विश्वस्त र स्वतन्त्र महिला खोज्न. जबकि तपाईं चिन्तित हुन वा आफ्नो मान्छे चासो देखाउन चाहनुहुन्छ, हुनुको पनि उपलब्ध desperation मार्फत आउनेछ.
हरेक मानिस एउटा स्वतन्त्र महिला अधिकार चाहन्छ?! तथापि, तपाईं पनि हो भने “मा-गर्न” आफैलाई, मानिसहरू बन्द गरिनेछ. यो राम्रो तरिकाले तपाइँको साझा रूपमा आफ्नो मिति र आफ्नो अनुभव र चासो कुरा समय खर्च गर्न महत्त्वपूर्ण छ.
निरन्तर तपाईंको फोन मा हुँदा
तपाईं आफ्नो संभावित श्री जान्ने मिति छन्. सही र विपरित. निरन्तर आफ्नो फोनमा हुनुको मानिस आफ्नो फोन मिति गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन रूपमा अशिष्ट छ, उहाँले तपाईंलाई थाहा प्राप्त गर्न चाहन्छ. मात्र सम्पूर्ण मिति लागि आफ्नो झोला मा आफ्नो फोन छैन भनेर पक्का तर पनि यो मौन मा भन्ने निश्चित.
समय परिवर्तन र पहिलो मिति मा भुक्तानी गर्न दे रहे आवश्यकता बन्दैछ. जबकि मानिसहरूको एक मुट्ठी तिर्ने मा जिद्दी हुनेछ, तपाईं बिल कम्तिमा विभाजित गर्न प्रस्ताव भने धेरै निरुत्साहित गरिनेछ.
मिति मा एक वा दुई पेय भएको पूर्ण ठीक छ, जबकि, अधिक पिउने वा एक मितिमा पिएको रही उहाँलाई आफ्नो जीवन लागि चलिरहेको हुनेछ. मात्र तपाईं छैनन् गम्भीर सम्बन्ध लागि तयार तर oftentimes संभावित तपाईं पछुताउनु सक्छ केहि भन्दै निकै धेरै सुराकी पिउने कि यो देखाउँछ.
उहाँलाई परिवर्तन गर्न प्रयास गर्दै
एक मान्छे गरेको संभावित आफ्नो प्रेम जीवन सट्टेबाजी प्रकोप लागि एक नुस्खा छ. आफ्नो सिद्ध मान्छे बन्ने एक क्रोध र रिसले भरिएको मा कुनै पनि सम्बन्ध हुनेछ मा उहाँलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दा त्यो आकर्षक छ वा पैसा छ बस किनभने कसैले डेटिङ.
पुरुष पूर्ण तत्काल you're-द-एक-let's-प्राप्त-विवाह मा पहिलो मिति गर्ने बारी महिला बन्द गरिएका छन्. कुनै राम्रो भावना त्यसपछि एक अद्भुत पहिलो तारीख तर महिलाहरु भइरहेको छ, राख्नुभएको “म तिमीलाई माया गर्छु” पहिलो केही महिना लागि आफैलाई विचार. गम्भीर रही र पनि चाँडै ती भावना व्यक्त आफ्नो मानिस रन बनाउन हुनेछ.